Global Voices teny Malagasy » Naniry Ny Hijery Ny Karnivalin’i Sainte Lucie Tamin’ny Fahitalavitra, Tamin’ity Taona ity ? Tsy Nanam-bitana Ianao ! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Aogositra 2014 3:13 GMT 1	 · Mpanoratra Matthew Hunte Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Karaiba, Saint Lucia, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Ny Mpanjakalahy sy ny Mpanjakavavin'ireo tarika mpifaninana tamin'ny Karnivaly 2013 tao Sainte Lucie. Sary nalain'i Addy Cameron-Huff, mpampiasa Flickr, nampiasàna ny lisansa CC BY 2.0.
Ireo teratanin’I Sainte Lucie na ny eo an-toerana na ny any am-pielezana ka tsy afa-nanatrika ny Karnivaln’ny nosy Karaiba, izay vao nifarana tamin’ny Talata 22 Jolay teo, dia nandalo fotoan-tsarotra tamin’ity taona ity noho ny fanapahan-kevitra noraisina amin’ny tsy nampitàna mivantana amin’ny fahitalavitra ny ankamaroan’ny hetsika nisy tamin’ilay fetibe , anisan’izany ireo famaranana ny fifaninana “Calypso” izay tena ankafizin’ny maro tokoa.
Nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny Birao misahana ny Fikarakaràna sy ny Fitantanana ny Karnivaly fa ny fatiantoka no antony tao ambadik’iny fihetsika iny:
Natao iny fihetsika iny mba ho enti-manohana sy mampitombo ny vola azo avy amin’ny vidim-pidiran’ireo hetsika nisy nandritra ny Karnivaly, izay nampitaina mivantana foana tamin’ny fahitalavitra hatramin’izay, ary indraindray aza amin’ny alalàn’ny sehatra fampitàna mivantana anaty tranokalan-tserasera. Na izany aza anefa dia mitohy hatrany ny fampitàna mivantana ireo seho rehetra amin’ny alalàn’ireo fampielezam-peo mpiara-miombon’antoka samihafa amin’ny fetibe.
Ireo Karnivaly misy manerana ny faritra  moa dia kolontsaina nentim-paharazana izay mamerina any amin’ny fetiben’ireo mpanompo sampy, ary narahan’ny Ejiptiana, ny Grika, sy ny Romana, tany ampiandohana, noraisin’ny Eglizy katolika izany taty aoriana, ka navadiny ho fetiben’i Carne Vale—fanaovam-beloma ny hena—izay tafiditra tao Karaiba niaraka tamin’ny fahatongavan’ireo voanjo Eropeanina. Nitazana ireo tompony nanatanteraka ny fankalazàna tamin’ny dihy amam-panovam-pitafy hafahafa ireo mpanompo, izay tsy nahazo nandray anjara tamin’izany, no sady naka tahaka ny fihetsik’izy ireo ombam-panesoana.
Novain’’ireo mpanompo teo aloha tanteraka ny Karnivaly nentim-paharazana, rehefa nahazo fahafahana  izy ireo, ka nomeny endrika afrikana miaraka amin’amponga, ary nanjary fetibe an-dalàm-be izany, izay nivoatra sy mitohy mandrak’ankehitriny, tsy manan-tsahala, mampifangaro ny mozika sy ny fanovàm-pitafy hafahafa. Misy ampahany zavakanto, misy ampahany teatra, biby manahirana ny Karnivaly izay mampifangaro ny nofinofin-tsaina sy ny vakodrazana, mozikan'ny vely lapoaly arahan'ny tsikera ara-politika.
Notazonina ny tetiandro Katolika Romana, ka ny Karnivaly izay natao ny Alatsinainy sy ny Talata dia ankalazaina foana amin’ireo andro mialohan’ny Alarobian'ny Lavenona , ary aorian’izay dia tokony atsahatra daholo ireo fanaranam-po mahafinaritra rehetra mandritra ny 40 andro manaraka, izay fotoan’ny Karemy . Henjana anefa ny fifaninanana avy tamin’ireo hetsika hafa lehibe kokoa sy be mpankafy, toy ny Karnivalin’ i Trinidad sy Tobago , ka voatery nafindran'ny Governemantan'i Sainte Lucie ny fankalazana ny Karnivalim-pirenena , dimy ambin’ny folo taona lasa izay, any amin’ny fisasahan’ny volana Jolay, mba hisarihana mpizahantany misimisy kokoa.
Efa nanakaiky ny faratampony ny Karnivalin'i Sainte Lucie  tamin'ity taona ity, ka noho izany, na ireo mpijery na ireo mpiasan’ny media dia samy nanambara ny hasosoran’izy ireo tamin’ny fandraràna ny fampitàna mivantana ny Hetsika rehetra natao nandritra ilay fetibe. Tamin’ny alalàn’ny haino aman-jery sosialy, nosoratana tao amin’ny vondrona Facebook hoe “Mikatsaka ny fandrosoana ny mponin’i Sainte Lucie”, tezitra i Clinton Reynolds  ary nahatsapa fa tsy mitombina ny antony nambara nandraisana iny fanapahan-kevitra iny:
Tena mihemotra ! Mba nieritreritra ireo teratanin’i Sainte Lucie any ampielezana, ireo any amin’ny firenen-kafa, sy ireo vahiny ve ny mpikarakara, izy ireo izay mety ho liana amin’ny fandraisana anjara amin’ny Karnivalin’i Sainte Lucie amin'ny fijerena ny fizotran’ny fifaninanana amin'ny fotoana itrangàn'izy ireny? Ary ahoana koa ny momba ireo mpankafy eto an-toerana izay TSY afa-nanatrika ? Antenaiko fa hameno ny vola azonareo tamin’ny vidim-pidirana ho tonga hatreny amin’ny tafo iny fanapahan-kevitra iny !
Noheverin’i Carn Tobierre fa tena tokony nahazo vola tokoa tamin'ny fampitàna mivantana ireo mpikarakara :
Raha toa ka ny paosy no olana, minoa ahy ianareo fa nandinika lalina sy matotra tsara ny mikasika ny fampitàna mivantana izy ireo, satria fomba tena fatratra ahafahana mampidi-bola tsy hita pesimpesenina izany raha toa ka atao amin’ny ara-dalàna. Tafakatra tokony ho 50.000 dolara no mihoatra ny vola azo nandritry ny 3 telo taona farany, ka araka ireo adihevitra niatomboka tamin’ny taon-dasa, dia tena mbola nisy tokoa ny fahafahana nampitombo izany.
Nohantitranterin’i Shayne Cherry koa, fa fanapahan-kevitra tena mampihemotra iny, indrindra ireo artista eto amin'ny firenena, izay raha tsy izany, dia afaka nanararaotra niseho ho fantatr'olona, araka ny tena ilain'izy ireo :
Toa miverin-dalana isika izany…Misy olona mitady hanadala ireo mpanakanto mahonena ireo ka manao izay ihemoran’izy ireo raha tokony handroso. Ankehitriny, tsy misy olona avy ao anatin’ireo komity mpikarakara ny “caribana” [Karnivaly goavam-ben'ny Indiana tandrefana ao Toronto ], ny “labour day” [matso lehiben'ny Karaiba tanterahana ao New York ] na koa “notting hill” [Karnivaly isan-taona, izay hetsika atao ao Londres ] hahita anao. Nefa ianao manantena ny haharay antso an-telefaonina ho amin’ny fandraisana anjara ny amin’ny manaraka. Mihevitra ianao fa i “Machel” [Montano, kalaza indrindra amin'ny Soca, eto amin'ny faritra , ny mozikany nanjary mitovy dika amin’ny Karnivaly] dia tsy mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny kamerà ary manao izay tsy maintsy hahitan’ny olona azy…Amin’ny fomba ahoana moa ny hampalaza anao raha tsy manana sary aparitaka ianao.
Nomarihan’i Nadia Cauzabon fa mety nanamora ny fifanantonan'izy ireo  amin'ny teratanin'i Sainte Lucie ny fampitàna mivantana ireo seho rehetra nisy nandritra ny Karnivaly, eny fa na ireo mitoetra eto amin’ny Nosy aza :
Voalazako izany hatramin’ny herinandro lasa, mbola tsy hiresaka ny momba ireo any am-pielezana akory ny tenako. Ireo hetsika nasionaly rehetra ireo dia tany avaratra daholo no natao (Castries/Gros Islet). Dia ahoana izany ny momba ireo amintsika monina amin’ny faritra hafa eto amin’ny Nosy ? Firy amin’ireo no afaka nivezivezy namonjy ireo fampisehoana ?
Niray feo tamin’izany koa I Chad Alexander raha nilaza fa ny fiheverana ny fampitàna mivantana ireo hetsika rehetra dia mety nampanjary azy ireo ho toy ny goavana sy manintona kokoa . Nahagaga azy koa ny fahosàn’ny ezaka natao mikasika ny haivarotry ny fetibe, izay araka ny heviny, tokony natao manotrokotroka satria tsy ny fampielezam-peo sy ny fahitalavitra intsony izao no entina ampahafantarana ny tetiandron’ny karnivaly:
Tsy mihambo ho mahalala zavatra mikasika ny haivarotra, ny fivarotana ary ny hetsika goavana aho, nefa kosa araka ny fiheveran’ny olon-tsotra, ny fampisehoana vokatra tsara kalitao miaraka amin’ny fampitàna mivantana dia efa miteraka rivom-panentanana sy fampahafantarana ”izay mamporisika ny olona mba ho isany ho ao anatin’ny fetibe”…(ny) vokatry ny “bandwagon”. Ary na vitantsika izany na tsia, dia tena manatanteraka ny andraikitra roa soson’ny haivarotra mihitsy izy ho an’ny hetsika amin’ny taona ho avy. Noho ny fampitàna mivantana, any ho any, misy teratanin’I Sainte Lucie mikasa ny hanao karnivaly amin’ny taona manaraka….ary hamporisika koa ny naman’izy ireo tsy avy ao Sainte Lucie mba ho tonga.
Noho ny hamaroan’ny safidy ara teknolojika misy ankehitriny anefa, mety misy angamba safidy hafa koa ? Misy zanaka ampielezana mpampiasa ny facebook, Kermz Francis, nanoro hevitra  hoe, ny Karnivalin’i Sainte Lucie dia tokony nahazo ny anjara-mofomaminy ary nihinana izany koa, raha toa ka nandoavana sarany-isaky–ny fijerena lanonana. “Samy misy maha tsara azy ny lafiny roa amin’ny adihevitra, saingy tsy misy maharatsy ny fanovàna fotsiny ny hetra aloan’ireo te-hijery ny fampitàna mivantana “.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/08/17/62346/
 nampitàna mivantana amin’ny fahitalavitra ny ankamaroan’ny hetsika nisy tamin’ilay fetibe: http://www.stlucianewsonline.com/cpma-restricts-live-video-broadcast-of-carnival-events/
 misy manerana ny faritra: http://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean_Carnival
 Alarobian'ny Lavenona: http://en.wikipedia.org/wiki/Ash_Wednesday
 Karnivalin’ i Trinidad sy Tobago: http://en.wikipedia.org/wiki/Trinidad_and_Tobago_carnival
 nafindran'ny Governemantan'i Sainte Lucie ny fankalazana ny Karnivalim-pirenena: http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Lucia#Festivals
 Karnivalin'i Sainte Lucie: http://www.luciancarnival.com/
 tezitra i Clinton Reynolds: https://www.facebook.com/groups/282803341756900/permalink/708842062486357/
 tena tokony nahazo vola tokoa tamin'ny fampitàna mivantana ireo mpikarakara: https://www.facebook.com/groups/282803341756900/permalink/708842062486357/?comment_id=708855692484994&offset=0&total_comments=30
 ireo artista eto amin'ny firenena, izay raha tsy izany, dia afaka nanararaotra niseho ho fantatr'olona, araka ny tena ilain'izy ireo: https://www.facebook.com/groups/282803341756900/permalink/708842062486357/?comment_id=708882909148939&offset=0&total_comments=30
 ao Toronto: http://www.caribanatoronto.com/
 ao New York: http://en.wikipedia.org/wiki/Labor_Day_Carnival
 ao Londres: http://www.thenottinghillcarnival.com/
 Montano, kalaza indrindra amin'ny Soca, eto amin'ny faritra: http://en.wikipedia.org/wiki/Machel_Montano
 nanamora ny fifanantonan'izy ireo: https://www.facebook.com/groups/282803341756900/permalink/708842062486357/?comment_id=708856855818211&offset=0&total_comments=30
 goavana sy manintona kokoa: https://www.facebook.com/groups/282803341756900/permalink/708842062486357/?comment_id=709084912462072&offset=0&total_comments=30
 Kermz Francis, nanoro hevitra: https://www.facebook.com/groups/282803341756900/permalink/708842062486357/?comment_id=709093419127888&offset=0&total_comments=30